Ahoana ny fomba ahazoana fidirana root amin'ny htc Tattoo | Androidsis
Ahoana ny fomba ahazoana fidirana amin'ny faka amin'ny Tattoo htc
Para mahazo fidirana amin'ny faka any amin'ny terminal dia isaky ny mila zavatra kely ianao sy ny Hct Tattoo Mitovy amin'ny azy ihany no mitranga Nexus One, miaraka amina rakitra tsotra dia voavaha ny zava-drehetra. Na ny fanovana fanarenana aza dia atao amin'ny alàlan'ny fanatanterahana an'io rakitra io fotsiny. Lazao fa tsy tompon'andraikitra izahay amin'ny fahavoazana mety hateraky ny fanandramana mahazo fidirana amin'ny faka amin'ny Tattoo htc.
Ny fampahalalana rehetra aseho eto dia nangonina avy ao amin'ny xdadevelopers. Raha te-hanao nomaniny ho solon'izay taloha ny angon-drakitrao ianao raha sendra misy zavatra tsy mandeha tsara amin'ny fizotran'ny mahazo fidirana amin'ny faka mandalo ianao Eto o Eto, izay hanazavany tsara azy io. Amin'ny ankapobeny, ny dingana tokony hataontsika dia dingana roa:
Mahita tsirony ity rakitra ity amin'ny solosaina ary esory amin'ny C: /.
Ampifandraiso amin'ny solosaina ny telefaona ary avelao amin'ny ara-dalàna. Tsy maintsy apetrakao ireo mpamily terminal.
Raha vantany vao esorina ny fisie, dia tsindrio indroa ao ilay rakitra tsy voahidy ary manindry lakile rehefa angatahina. Rehefa Htc Tattoo dia hiverina indray ary voila.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Root » Ahoana ny fomba ahazoana fidirana amin'ny faka amin'ny Tattoo htc
nosekefik dia hoy izy:
Ity no vahaolana ho an'ny tato amin'ny 2.1 raha toa ka tsy eken'izy ireo ofisialy!
Mamaly an'i nosekefik
HTCmania foreros sy xdadevelopers no voalohany namaka
hafa dia hoy izy:
Ho an'ireo izay te-hanao izany dia manoro hevitra anao aho handalo htcmania na xdadevelopers ary hijery azy tsikelikely, ny fanazavana an'ity lahatsoratra ity dia toa somary tsy feno, ankoatr'izay efa elaela vao vita izany. Ny fanovana farany tamin'ny 18 martsa. Ny vaovao anio dia tokony ho 2.1 dia efa mihazakazaka amin'ny tatoazy, na dia somary maintso kely aza
Nahoana no tsy feno?
Ahoana ny amin'ny famoronana karatra volamena raha sanatria? Mety ho an'ny tatto rehetra ve ny fisie amin'ilay rohy na ho an'ny an'ny orange sy vodafone (ireo an'ny Moviestar dia manana kernel hafa)? Moa ve aho manatanteraka ilay rakitra avy amin'ny c: sa mila mandeha any amin'ny rtattoo aho? Inona no hataoko manomboka amin'ny maody fanarenana?
Heveriko fa malina kokoa ny hamindra ny mpamaky anao amin'ity lahatsoratra ity
izay nohazavaina ny lafiny rehetra ary fampianarana feno sy amin'ny teny espaniola izay mametraka rohy mivantana amin'ny faka, no fiheverako maotina.
Rehefa namaky azy io tamin'ny Xda aho, ary koa toa ny hita ao amin'ny htcmanía, ny zavatra napetraka fotsiny no tsy hita. Aza matahotra anefa fa manitsy sy mametraka ireo rohy aho izao. Amin'ny htcmania dia manao asa tsara ry zareo.
Rom misy android 2.1 koa dia novolavolaina tamina htcmania ary amin'izao dia mandeha tsara izany. Ary farany misy ny Bluetooth miasa, ny hany zavatra tsy mandeha amin'ny fakan-tsary sy ny sary dia tena ratsy fa miasa izy ireo hamaha azy.
J2Android, mihazakazaha rakitra ".jar" amin'ny Android
Android-Sync, ampifanaraho amin'ny Microsoft ny Microsoft Outlook